Manchester United Oo Xiriir La Sameysay Wakiilka Piotr Zielinski
Home Wararka Ciyaaraha Manchester United oo xiriir la sameysay wakiilka Piotr Zielinski
Kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay xiriir la samaysay wakiilka Piotr Zielinski si ay ugu dhaqaaqdo saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Napoli inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Red Devils ayaa la sheegayaa inay suuqa ka raadineyso qad dhexe oo cusub ka hor xilli ciyaareedka cusub, waxaana sidoo kale lala xiriirinayay ’ Ruben Neves .
Sida laga soo xigtay Corriere del Mezzogiorno saxafiga Ciro Troise, xubnaha ku weheliya Zielinski waxaa la soo xiriiray Man United si ay ugala hadlaan heshiis ku saabsan suuqa haatan socda.
Troise, oo la hadlay Marte Sport Live, ayaa sidoo kale sheegtay in Liverpool ay la xiriirtay si ay u diiwaan geliyaan xiisahooda.
Xiddiga reer Poland ayaa ku riyaaqay ololihii cajiibka ahaa ee xilli ciyaareedkii 2019-20 ee Napoli, isagoo dhaliyay 10 gool, waxaana uu gacan ka geystay 13 caawin 47 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan sideed gool iyo 11 caawin uu ka sameeyay Serie A.
Zielinski wuxuu la joogay Gil Azzurri ilaa 2016 wuxuuna wali heystaa seddex sano oo uu ku sii joogi karo qandaraaskiisa haatan, taasoo la micno ah in kooxda reer Talyaani aysan saarneyn wax cadaadis deg deg ah oo ah inay iibiso.
Previous articleWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Chelsea oo la Hadashey Wakiilka Robert Lewandowski, Liverpool oo direysa Shan Ciyaaryahan Iyo Qodobo kale
Next articleRaheem Sterling oo ka mid ah ciyaartoyda ay Manchester City ku dari karto dalabka Harry Kane